Iintsuku ze-GIS - 29 kunye ne-30 ka-Meyi 2019-Geofumadas
Iintsuku ze-GIS - 29 kunye ne-30 kaMeyi 2019
Meyi, 2019 Geospatial - GIS
Ingqungquthela ye-GIS yamahhala, ehlelwe yiNkonzo ye-SIG kunye ne-Remote Sensing Service (i-SIGTE) yeYunivesithi yaseGrona, iya kubanjelwa kwi-29 kunye ne-30 iintsuku ngoMeyi kwi-Facultat de Lletres i-Turisme.
Ngethuba leentsuku ezimbini kuya kuba nenkqubo ephezulu kakhulu yezipikethi, iintetho zonxibelelwano, izifundo kunye neendibano zocweyo ngenjongo yokubonelela indawo yokuxubusha kunye nokufunda malunga nokusetyenziswa kobuchwepheshe be-geospatial evulekile nekhululekile. Kulo nyaka siye sagqitha abahlali be-200 abavela kwiCatalonia kunye nakwilizwe lonke laseSpain, bahlanganisa i-Girona njengendawo yokuhlangana kunye nenqaku lokubhekisa kulo candelo elikhethekileyo njenge-GIS yamahhala.
Le nkomfa ijolise ukuxhuma abasebenzisi, abaqulunqa, abaphuhlisi kunye nabantu abanomdla kwimithombo ye-geospatial yomthombo ovulekile ukuba ingaba kwintsimi yezoshishino, iYunivesithi okanye uLawulo loLuntu.
Inkqubo ibonisa iintetho zeplaniyari kaSara Safavi, evela kwinkampani yaseNorth American Planet Lab, oya kwenza intetho ethi "Ihlabathi Lwamkelekileyo: Iintetho zeTatellites, Impembelelo Enkulu. Emva koko, u-Pablo Martínez, evela kwinkampani yaseBelcon 300.000km, uya kuthetha malunga nendlela yokucinga kwakhona ngexesha elizayo leedolophu ngokusebenzisa imidwebo yemifanekiso. Kwaye, ekugqibeleni, kuya kuba ngu-Víctor Olaya, umthuthukisi we-GIS nomlobi, oya kuthetha nge-ecosystem ye-GIS yamahhala.
Ukongezelela, le nkqubo idibanisa uxhulumaniso lwe-28 olusasazwa ngeeseshoni ezifanayo ezinxulumene nezihloko ezihlukeneyo ezifana ne: idatha evulekileyo kunye nee-IDE, iimephu, iiprojekthi zobuchwepheshe eziphambili, iimeko zokusebenzisa, iiprojekthi zezemfundo, njl njl. Inkqubo igqitywa ngee-tutorials ze-4 kunye nee-workshops ze-6 eziza kwenzeka ngosuku olulandelayo kumagumbi ekhomputha. Usuku losuku lwe-29 luya kugqiba ngethuba lika-Antonio Rodríguez kwi-National Geographic Information Centre (CNIG) oza kuthetha malunga nolwazi oluvulekile kuluntu oluvulekile.
Ibalaphu yeqela kunye nohambo lwebusuku
Njengoko ulungelelaniso lwolu hlobo luya kubanjelwa iqela leemephu, intlanganiso yokudibanisa imephu eyahlukileyo e-Girona eneenjongo enye: zichonga izithintelo zokwakha zeso sixeko. Injongo yalo msebenzi kukuqokelela idatha yokufikelela kwi-edolophu yaseGerona uze uyilayishe kwi-OpenStreetMap. Ngendlela ezonwabisa kunye neyohlukeneyo abaya kubakho bayakwazi ukwazi isixeko ngelixa bebambisana kwimephu yeso sixeko.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Bentley Systems izisa ukuba i-OpenSite Designer ikhoyo ngoku
Post Next #BIM - Ikhosi yokuHlaziya ye-Autodesk - kululaOkulandelayo "